စီးပွားရေးသမားများ အကွက်တွေ့သည့် သင်္ကြန်ကာလ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » စီးပွားရေးသမားများ အကွက်တွေ့သည့် သင်္ကြန်ကာလ
Posted by manawphyulay on Mar 23, 2013 in Business & Economics, Ideas & Plans |7comments
စားသုံးသူဆိုတာဟာ ထုတ်လုပ်မှု ပြုဖို့ သို့မဟုတ် ပြန်လည်ရောင်းချဖို့ မဟုတ်ဘဲ မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲမှု အတွက် ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေကို ၀ယ်ယူသူပဲဖြစ်တယ်လို့ ဘောဂဗေဒ သီအိုရီက ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ စားသုံးသူအုပ်စုထဲကို ထည့်သွင်းနိုင်စရာ ရှိတာကတော့ ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကို အဖိုးအခပေးပြီး ငှားရမ်းသုံးစွဲသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးသွားယာဉ် တစ်ခုခုကို စင်းလုံးငှား၍ဖြစ်စေ၊ မိမိတစ်ကိုယ်စာ လက်မှတ်ဝယ်ပြီး စီးနင်းခြင်းဖြင့် ဖြစ်စေ ၀န်ဆောင်မှုရယူသူတွေကိုလည်း စားသုံးသူအဖြစ် သတ်မှတ်သင့် ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေ နိဒါန်းပျိုးရတာကတော့ ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ စားသုံးသူတွေရဲ့ အခြေအနေကို လေ့လာဆန်းစစ်စေချင်တဲ့အတွက်ပါ။ တကယ်တော့ ပြည်သူတွေဆိုတာ စားသုံးသူတွေပါပဲ။ လူတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေချိန်မှာ ထုတ်လုပ်သူ၊ ရောင်းချသူနေရာမှာ ရှိနေပေမယ့် သူလိုအပ်တာတွေ ၀ယ်ယူသုံးစွဲရချိန်မှာတော့ ဒီလိုလူဟာလည်း စားသုံးသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် စားသုံးသူတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးဆိုတာတွေကလည်း လူအများစုရဲ့ အခွင့်အရေး တစ်ရပ်လို့ ပြောရမှာပါ။ စားသုံးသူဘက်က မကြည့်ပဲ ရောင်းချသူဘက်က ကြည့်မည်ဆိုလျှင် အမြတ်အစွန်းများသည် လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် လွန်စွာမှ အရေးပါကြောင်းကို ကျွန်မတို့ သိရှိနားလည်ထားကြ သကဲ့သို့ အမှန်တကယ်ပင် ထိုအရာများကသာလျှင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေနိုင်ရန်နှင့် တာရှည်ခံနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးသည့် အရေးကြီးသည့် အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြောင်း လွန်စွာမှ အရေးပါတယ်ဆိုတာ သိရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၌ မဆို ဈေးနှုန်းတန်ဖိုးသည် အလွန်အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်ပြီး အကျိုးအမြတ်ရရေး၌လည်း အခြေခံကျသည့် အချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် မှန်ကန်သော တရားနည်းလမ်းကျ ဖြစ်ဖို့တော့ လိုမည် ထင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းလုပ်သူတိုင်း ဈေးကွက်စီးပွားရေးရာ နည်းနာများအရာ၌ ရောင်းအားကို ဖြစ်ပေါ်စေမည့် P လေးလုံးအကြောင်းကို သိရှိပြီး ဖြစ်နေမှာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါသည်။ ထုတ်ကုန်ဆိုတာ စားသုံးသူများ လိုအပ်လျက်ရှိသော အရာတစ်စုံတစ်ခုကို ရောင်းချပါဆိုတာပဲ ဖြစ်သလို ဈေးနှုန်းတန်ဖိုးအတွက် စားသုံးသူများဘက်မှ လိုလိုလားလား ပေးနိုင်သော နှုန်းထားတစ်ခုဖြင့် ရောင်းချပါ သို့ဆိုလျှင် သင်ရဲ့ အမြတ်အစွန်းတွေ တကယ်ရရှိလာပါမည်။ P လေးထဲက ဒုတိယ အကြောင်း အရာလေးကို ပြောချင်လို့ပါပဲ။ လူတိုင်း သိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ သင်္ကြန်မတိုင်ခင် ဈေးနှုန်း သတ်မှတ်ချက်ထက် ပိုမို ရောင်းချသောအရာများက ဘယ်အရာတွေလည်းဆိုတာ ခရီးသွားသူ၊ နယ်ပြန်သူ၊ နယ်မှပြန်လာသူများ၊ အရေးပေါ် ခရီးသွားသူများ သိရှိပြီး ဖြစ်မည်ထင်ပါသည်။ သင်္ကြန်ကာလ မတိုင်ခင် ဈေးနှုန်းတွေ အဆမတန် တိုးမြှင့်ရောင်းချသည်မှာ မည်သူကို မည်သို့ သွားရောက် ပြောကြား ရမည်ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းချက်လေး တွေကိုလည်း သိချင်နေမိပါသည်။
သင်္ကြန်မတိုင်ခင် ခရီးသွားသူများ များပြားနေမည် ယူဆမိသဖြင့် နယ်သို့သွားရန်အတွက် တစ်လ ကြိုတင် ကားလက်မှတ်ဖြတ်သည့်အခါ မကြုံဖူး ၀ယ်ဖူးမှသိဆိုသလို ကားလက်မှတ်များ ၂ ဆလောက် တက်နေတာကို ကြုံရပါတော့သည်။ တစ်လကြိုဝယ်တာတောင် ဒီလောက်တက်နေရင် ခရီးသွားခါနီးဝယ် မည်ဆိုလျှင်တော့ လက်လုပ်လက်စားသမားများအတွက် အတော် အခက်အခဲဖြစ်နေမည်ကို တွေးကြည့်မိ ပါသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွင်း ဈေးကွက်ဈေးနှုန်းများကို ယခင်က သတ်မှတ်ဈေးထက် ပိုမို ကောက်ခံ ရောင်းချနေသည်မှာ အထက်က ရောင်းခိုင်းလို့လား၊ ဒါမှမဟုတ် သင်္ကြန်မတိုင်ခင် ဈေးတက်ရမယ်လို့ ကနဦးထဲက ထုံးစံရှိနေလို့လားဆိုတာကို စဉ်းစားမရဖြစ်နေမိပါသည်။ ဒီလိုအချိန်မှ အမြတ်အစွန်းမရရင် ဘယ်လိုအချိန်မှာ ပိုမိုရရှိနိုင်ပါသလဲဆိုတာ ရောင်းချသူတွေအနေဖြင့် တွေးမိကောင်း တွေးမိကြမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဒီလိုအနေအထားတော့ စားသုံးသူဘက်က ကြည့်လျှင်တော့ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ မြင်မိပါသည်။
ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ ထိုင်ခုံအပြည့် လက်မှတ်ရောင်းပြီးမှ ကြားခုံတွေ ထိုးကာ လူပိုတင်တာတို့၊ စီးနင်းလိုက်ပါသူတွေ အသက်မရှူဝံ့လောက်အောင် မော်တော်ကားကို တရကြမ်းမောင်းတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေလည်း ရှိပါသေးသည်။ ဒီလိုအချိန်မှ ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာ သွားကြရတာဆိုတော့လည်း ခရီးသွားများကတော့ ရရင် ရသလို စီးကြတာများပါသည်။ ဒါကြောင့် စားသုံးသူတွေရဲ့ အခွင့်အရေးဆိုတာဟာ လူအများစုရဲ့ အခွင့်အရေးလို့ပဲ ပြောလို့ရမှာပါ။ ယခု ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ စားသုံးသူ အခွင့်အရေးအတွက် လူသိရှင်ကြား တိုင်တန်းဖောက်ထုတ်မှုတွေ တရားစွဲဆိုမှုတွေ မရှိပေမယ့် စားသုံးသူတွေအနေနဲ့ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကတော့ အနည်းနဲ့ အများကတော့ ရှိနေတာကို တွေ့နေရပါသည်။
တချို့ပစ္စည်းတွေ အတွက် အာမခံချက်လို့ခေါ်တဲ့ warranty card တွေရှိနေသလို ပစ္စည်းအတော် များများအတွက်တော့ ၀ယ်ပြီး မကောင်း၊ မသုံးနဲ့ပေါ့လို့ ပြောနေသလို အာမခံချက်ဆိုတာ ဘယ်နား ရောက်နေမှန်း မသိရသလို ဆိုင်တွေရဲ့ တစ်ခွန်းဆိုင်လို့ ချိတ်ဆွဲထားသည်များအပြင် ၀ယ်ပြီးပစ္စည်း ပြန်မလဲပါ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကြောင့် စားသုံးသူများရဲ့ ၀ယ်ယူနှောင့်နှေးမှုများကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ အာမခံ မရှိသော ပစ္စည်းများကို ၀ယ်ယူ သုံးစွဲရခြင်းကြောင့် စားသုံးသူများရဲ့ အပိုကုန်ကျမှုများလည်း ဆင့်ကဲ ဆင့်ကဲ ဖြစ်ပွားလျက် ရှိနေပါသည်။ ရပ်ကွက်အတွင်းမှ တချို့ဆိုင်များသည်လည်း အကြွေးအမ်းစရာ မရှိသဖြင့် ပေးလိုက်သော ပိုက်ဆံအလိုက် ကုန်ပစ္စည်းများကို ၀ယ်ယူနေခြင်းကိုလည်း နေ့စဉ်နဲ့အမျှ တွေ့ကြုံနေရခြင်း လည်း ဖြစ်ပါသည်။ အမ်းစရာမရှိဟု ဆိုကာ ကော်ဖီမစ်အမ်းလိုက်၊ တချို့နေရာလိုက်ဆိုင်များတွင် ဈေးနှုန်းချိုသာသော တစ်သျူးများကို အကြွေ အမ်းစရာမရှိဟုဆိုကာ စားသုံးသူများကို ပြန်လည်ပေးနေ သည်ကိုလည်း မြင်တွေ့နေရပါသည်။ စားသုံးသူများဘက်မှလည်း အကြွေးမရှိလျှင် ယခုလိုမျိုး တစ်သျူးများ၊ သကြားလုံးများ ပြန်လည်ပေးမည်ဆိုလျှင်ကော ရောင်းချသူများဘက်မှ မည်သို့ မည်ပုံ တုံ့ပြန်မည်နည်း။ လုပ်ငန်းအားလုံးတွင် စားသုံးသူများ အလိုရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများကို လိုချင်သော အချိန်၊ လိုချင်သော ဈေးနှုန်းအတိုင်း အခြေအနေ အရည်အသွေးများ ရရှိနိုင်ရန်မှာ ကောင်းမွန်သော ရောင်းချသူများအပေါ်တွင် အပြည့်အ၀ မှီခိုနေသည်ဆိုတာ စားသုံးသူများဘက်မှ အပြုသဘောဖြင့် ရေးသားတင်ပြလိုက်ရခြင်းပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။
ပိတ်ရက်ရောက်တော့မှာမို့ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့အပြန်ခရီးမှာ အခက်အခဲတွေကတော့ အပြွတ်လိုက်အသိပ်လိုက်ပဲ။
သင်္ကြန်ပိတ်ရက်က ရှည်လွန်းတော့ လုပ်အားတွေ ဆုံးရှုံး၊
မတက်သင့်တဲ့ ဈေးနှုန်းတွေတက် ၊
ခေါင်းဆောင်ကောင်းလက်ထက်ရောက်ရင် တော့ ပြုပြင်လို့ ရမယ်ထင်ပါတယ် မနောရေ။
ဒီနှစ်သင်္ကြန်တော့ သိပ်ပျော်ရမယ် မထင်ဘူးမနောရေ။
သင်္ကြန်မှာ စီးပွားရေး သမားတွေ အကွက်တွေ့ဒါ မတွေ့ဒါဒေါ့ သိဝူးးဂျ …
အခု လာဒါဂ …
မမနောဖြူသေးလေးကိုလည်း သတိရတဲ့ထဲ ပါကြောင်း လာပြောတာ ….
အဲ့ဒါ … အဲ့ဒါ…. (ခွက်ဒစ်တူ ပေဂျီး)
အပေါ်ပိုင်းက ဟုတ်မလိုလိုနဲ့ ဘယ့်နှယ့် အောက်ပိုင်းရောက်မှ
ခေါင်းစဉ်နဲ့ မညီတော့ဘဲ .. ဖြစ်သွားရသတုံးကွယ်…
တခွန်းဆိုင် နဲ့ တစ်သျှူးအမ်းတာ က သင်္ကြန်နဲ့ မဆိုင်ဘူး
အပေါ်က Pလေးလုံးဘက် ဇောင်းပေးရေးတာလေး ဖတ်ချင်သေးပါကြောင်း..
အဆဲခံရမလားတော့မသိဘူး …နည်းနည်းလောက် ချတွက်ကျိဘာ့မယ်..
ဂလို …ဗျ … သင်္ကြန် မှာ ၁၀ရက်တောင် ပိတ်တယ်.. ဆိုတာ ..သိပ်တော့ ၀မ်းသာစရာ
မရှိဘူး ..မစိတ်ဖွေးပိစိတို့ ကျနော်တို့ဟာ ၀န်ထမ်းတွေဖြစ်နေလို့ များများပိတ်လေ
ကောင်းလေဆိုတဲ့ ..စိတ်တော့ ရှိကြမယ့်လူတွေချည်း မဟုတ်လား..။
တကယ်က လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍ က မဖွံ့ဖြိုးနေတာ..
အားနည်းနေတာ ကို ဘွားကနဲ တွေ့လိုက်ရတယ်..
စဉ်းစားကြည့်ဗျာ.. သင်္ကြန်မို့ ပိတ်ရက်ရှည်လို့ ဇာတိကိုပြန်တဲ့လူများတယ်..
လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး ၀န်ဆောင်မှု ကဏ္ဍ ဟာ အပမ်းဖြေ ပိတ်ရက် ခရီးသွား မှု အပေါ်သာ
မီခိုနေရ… business trip အပိုင်း အားနည်းနေသေး … တနှစ်တာ ပျမ်းမျှ trip တွေရဲ့ load
သည် နှစ်သစ်ကူးပိတ်ရက်ရှည် မှာ ကြုံရတဲ့ load ကို ဘယ်လိုမှ မယှဉ်နိုင်သေး
ရက်ရှည်ရှည်ပိတ်ပေးသည် ဆိုသည်မှာ .အဆိုပါ ..မမျှမတဖြစ်နေသော supply & demand gap ကို
အလွယ် ဖြေရှင်းမှုသာဖြစ်ပါသည်။ တရက်စောပြန် တရက်နောက်ကျပြန်… စသည်စသည်..
ဆိုတော့… ဈေးတက်တာ မှောင်ခို လုပ်စားတာ ..ခုံထိုးတာ … ရက်ရှည်ပိတ်တာ
စတာတွေအစား အမှန်တရားကို လက်ခံပြီး service ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင် အားဖြည့်ခြင်း
ဆိုတာကသာ ရေရှည်အောင်မြင်မှု အဆင်ပြေချောမွေ့မှု ကို ရမယ်ထင်ပါကြောင်း
သခင်မျိုးဟေ့ ဒို့ ဘာမန်
ပထမ ခေါင်းစဉ်ကြည့်လိုက်တော့ သင်္ကြန်တွင်း အသောက်တွေ အစားတွေကို ဈေးတင်ရောင်းတာကို ရေးထားတာမှတ်လို့။
ခု ပြန်မယ်ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတိုင်းလည်း သင်္ကြန်လည်ဖို့ထက် …
ဒီလိုတွေ ဘယ်အစားအသောက်တွေကို ဘယ်လောက်တင်ပြီး ဘယ်လို ရောင်းမယ် ဆိုတာမျိုးချည်းပဲ ကြားနေရလို့။
စီးပွါး စီမံကို မသင်ဖူးတော့ကျန်တာမပြောတတ်။
ဈေးကြီးပေးရလည်း သွားမဲ့အထဲပါ၊ စားမဲ့ အထဲပါ နဲ့၊
ကိုယ်ကလွဲရင် ကျန်တဲ့ လူတွေပဲ စီးပွါးဖြစ်သွားမှာပဲ။